Ogaden News Agency (ONA) – Faallo: Maxay Itoobiya Xasan Sheekh Ku Jeclaatay?
Faallo: Maxay Itoobiya Xasan Sheekh Ku Jeclaatay?
Taliska Woyaanaha ayaa si badheedh ah u muujiyay taageerada ay u hayaan Xasan Sheekh Maxamuud. Mudadii uu talada qaranka Soomaaliyeed hogaaminayay Xasan Sheekh wuxuu si dadban u fuliyay awaamirta iyo rabitaanka Gumaysiga Itoobiya.
Shacabka Soomaaliyeed ayaa ku baraarugsan dabadhilifnimada Xasan Sheekh oo u dhaqmahayay mudadii uu dalka madaxwaynaha ka ahaa sida horjoogeyaasha Gobolada Itoobiya ee ka amar qaata taliska TPLF. Hadaba akhristoow waxaan si kooban kuugu ifinaynaa dhawr qodob oo kamid ah kuwa ugu muhiimsan ee Itoobiya ay Xasan Sheekh Maxamuud ku jeclaatay, waxayna kala yihiin:-
In uu ballan qaadey in uu ka tanaasulayo dhulka Soomaali Galbeed, xuduudkana laga saarayo dhamaan caalamadaha muujinaya in lagu muran san yahay.
In uusan dib usoo celin doonin Ciidanka Xooga dalka Soomaaliyeed.
In uu maamulkiisa oo idil ka dhigi doono xubno si qarsoodi ah ugu adeega danaha Gumaysiga Itoobiya.
In uusan dib usoo celin doonin qaranimadii Jamhuuriyada Soomaaliya.
Gumaysiga Itoobiya oo aaminsanin Xasan Sheekh oo la soo tijaabiyey in uu yahay qof halkeeda Soomaaliya ku hayn kara oon horumar gaadhsiin karin. Qodobadan iyo kuwo badan ayaa si weyn loo hadal hayaa in Gumaysiga Itoobiya ku jeclaaday in mar kale la doorto Xasan Sheekh, waxaase taas run ama been ka dhgi kara Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ee iyagu doorashada iska leh.